HEERKA AY DUMARKII ASXAABTU KA CAYAAREEN SIYAASADDII
XORIYADDA GUUR XULASHADA
MAXAA XIRAY IJTIHAADKII
HEERKA AY DUMARKII ASXAABTU KA CAYAAREEN SIYAASADDII JIRTAY
Haddaan hadalka ugu soo celino si faham waasacin iyo war ka dherjin ah, waxaa xusuusasho mudan taariikhda ay sameeyeen qaar ka mid ah Asxaabtii Nebiga ee dumar ahaa. Markii ay Nebiga iyo saaxiibkiisii qaalliga ahaa Abuu Bakar, ka baxsanayeen nimankii Mushrikiinta ahaa ee u soo diyaariyey shirqoolka dilka ahaa, waxaa caanaha iyo cuntada kale ugu geynayey keymaha khatarta ah inantii dhallinyarada aheyd ee uu dhalay Abuu bakar ee magaceedu yahay “ Asmaa Bint Abuu bakar”.
Rafiqa Bint Safiya , Faduma Bint Khadab, waxa ay waqtigii Nebiga shaqada dawladda Islaamka u qaabilsanayeen hawlaha wararka iyo isgaarsiinta. Waxa ay ahaayeen ama joogeen booskii wasiirka Warfaafinta 45.
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Amiirkii Muslimiinta, Cumar BN al-khadaab ka jeediyey khudbaddii Jimcaha ee todobaadlaha ahayd masjidka, markaa ayuu ka hadlay qodob yara xasaasi ahaa oo beryahaas ay mushkiladiisu taagneyd, (sida ay maantaba weli u taagan tahay). Qodobkaasi waxa uu ahaa dumarkii oo caadaystay in ay raggii guurkooda ku xujeeyaan kharash aad u fara badan si meher ahaan ah. Cumar oo ay dacwada noocan ihi soo kartay ayaa ku dhawaaqay in aysan maanta ka bacdi dumarku weydiisan karin meher ka badan cadad yar oo uu isagu gooyey.
Hase ahaatee gabadh ka mid ahayd dumarkii dhegaysanayey khudba jimcaadkaas (berigii hore khudba jimcaadka dumarku wey ka qayb gali jireen, laakiin hadda ma aqaan wax loogu diiday !!) ayaa farta taagtay oo la soo booday jawaab kulul iyada oo ku leh Amiirkii; Cumarow ma intuu Ilaahay Quraankiisa nagu xaq siiyey oo yiri; " Oo aad midood siiseen Qindhaaran- Buur dahab ah (aad u fara badan), ha ka qaadanina"46 ayaad adigu maanta naga goosanaysaa xaqii uu Ilaahay na siiyey. Si kale ahddii loo dhaho, ma waxaad noo qadaraysaa oo xisaab go’an nooga dhigaysaa xaqii uu illaahay nagu siiyey si furan oo aan xisaab go’an ahayn.
Cumar wuu isku yaxyaxay oo naxay, wuxuuna si hal haleel ah u soo xusuustay Aayaddaan oo markii hore maskaxdiisa ka maqneyd. Markaa ayuu isaga oo Tawbad keen ah isla goobtii uu taagnaa ka yiri: “ Haweeneyda ayaa asiibtay (heshay dhabtii), Cumarna waa gefay)47
Haddaan usoo dhaadhacno xagga kala tashiga dumarka waxyaalaha la xiriira arimaha siyaasadda. Waxaan ognahay in qodobka ugu xasaasisan uguna taxadar badan ee siyaasaddu uu markaste yahay dagaalka – ama wasaaradda gaashaan dhigga. Haddaba waxay ila tahay in aan midkeenna shaki kaga jirin in uu Nebigu in badan kala tashaday dumar weeraro ay Nebiga iyo Asxaabtiisu damacsanaayeen in ay qaadaan iyo weeraro lagu soo qadayey Asxaabta intaba. Waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karnaa; Markii uu Nebigu kala tashanayey Umu Salama heshiiskii Xudeybiya, oo ay keentay ra’yigii quruxsanaa ee lagu wada qancay, aakhirkiina isaga la wada raacay, markii ay kula talisay Nebiga N.N. K. H. A in uu inta hor tago Asxaabtiisa, hortooda ku xiirto si ay ugu daydaan oo uga yeelaan xiirashadii ay ka diidanaayeen.
Waxaa ila la yaaba leh kol haddii la arko ruux Aadami ah rag ama dumar kuu doono ha noqdee oo soo jeedinaya fikrada la arkayo wanaageeda ama qabanaya hawl loo jeedo faa’iidadeeda, maxay tahay daliisha kale ee la doonayaa? U malayn aan mahayo in uu jiro caqli ama diin ka hor imaanaya samafalka iyo samafarka, isla markaasna faraya in la iska indha tiro wanaag soo cad. Waxaanse hubaa in ay diinta Islaamku cadaysay in ay wax walbaaba sax yihiin kuna banaanyihiin sharciga marba hadduusan jirin xukun ama Nas (Quran ama xadiis) cad oo diidaya - aysan ahayn wax diintu Quraan ama Xadiis ku mamnuucday. Ama ugu dambayntii wax lagu mamnuucay qiyaas ama tafsiir laga dhiraandhiriyey nusuusta.
Waxaa ugu weyn qodobada ay culimada had iyo jeeraale ku doodaan in aan loo dhiibin dumarka xilka madaxtooyo cuskadaan qodobo la xiriira guurka iyo furriinka. Waxa ay leeyihiin waa in laga mas’uul -weli noqdaa marka ay qof haween ihi doonayso in ay guursato. Taasi waa in la baxsho ee aysan is bixin iyadu. Sidaa si la mid ah uma ay lahan wax awood ah inay iska furto ninkii ay ka caano diiddo. Haddaba si wadaadadaas loogu jawaabo, waxaa lama dhaafaan noqonaya in marka hore laga siiyo jawaab kaafi ah mas’alooyinka ay ka qiyaas qaateen qudhooda.
Sanado dhaw ka hor waxay ahayd lama dhaafaan in guurku uu ahaado mid ay soo diyaariyeen waalidiinta ama qaraabadu. Laakiin waxay taasi u gaar ahayd dumarka oo raggu iyagu way soo xulan kareen lamaankooda. Gabadhii aan ku qanacsanayn guurka loo soo xulay jidka keliya oo u furani waxa uu ahaa in ay is daldasho ama dalka ka qaxdo.
Si kastaba arintu ha ahaatee maanta taasi ma badna oo badanaaba waxaa gabadha la soo doonaa ka dib markii iyada nafteeda heshiis lala soo galo oo la isku hubo dhankeeda. Haddii kale waxa uu ninka lamaan doonaha ihi ka baqayaa in uu hungoobo oo marka uu waalidkii u yimaado isaga oo waydiisanaya gabadhii la dhalay, lagu xiro shardi ah in uu iyadii qudheedii kala yimaado heshiis ansaxinaya doonistiisa.. Hase ahaatee waxaa weli sii jira guur isku qasbid iyo weli dhigasho aan loo isticmaalin sidii habboonayd. Waxaad arkaysaa in ay arintu ku kala dhex jirto xad gudub iyo dayac.
Sidaas darteed waxaa nala gudboon in aan falalka noocaas ah ka qaylino inta aysan si dhab ugelin diinwaan dhaqameedka bulshada, gaar ahaan kuwa soo socda. Taas oo macneheedu yahay in la sugo qeexitaanka iyo ujeedada dhabta ah ee ay leedahay “welinimadu” ama gabadh bixintu .
Si aan arintaas u fariisinana waxa aan ku horaynaynaa in aan xusno macnaha welinimada anaga oo ka eegayna xag luuqad ahaan iyo xag sharci ahaan labadaba. Waxa lagu soo koobi karaa qeexitaankiisa: “ ugu dhaw qaraabo, ugu dhaw xiriir, dhaxalkiisa/keeda leh, ka faa’iidayste, ku xige, wax la wadaaga iyo lammaan”.
Haddaba macnayaalkaan dhawrka ah ee wada suurta galka ah in lagu xambaaro macnaha “welinimo”, waxa ay dhali karaan oo salka ku sii hayaan kuwa kala ah; waalidnimo, ilaaliye, ka mas’uul ahaade, xukume, la taliye, derisnimo, saaxiibtinimo iyo rukun ama macaamiil la ahaade.
Waxaa ka mid ah waxyaalaha la yaabka ah ee caado ahaanta isaga socda tan iyo quruumo hore, in tiiyoo uu Alle weyne boqolaal aayadood oo ka mid ah Quraanka ku sheegay in dadka Ilaahay ay siman yihiin, qof walbaana uu xor u yahay waxa uu ku dhaqayo iyo waxa uu u go’aaminayo naftiisa kol haddaysan xadgudbaynin, ayaad hadana weli arkaysaa in ay kuwa badani caadaysteen in aysan marnaba talo ka qaadan haweenka ee ay ugu taliyaan sidii ilmo saqiir ah ama ka sii daranba. Anaga oo arinta sii dhalaalinayna ayaa mudan in aan caddayno in ay marka horeba qalad tahay in la is weydiiyo in ruux aadane ah oo caqligiisu taam yahay laga hadlo in uu xaq u leeyahay soo doorashada iyo soo xulashada qofka uu doonayo in uu nolol kula qaybsado si guursi ah.
Laakiin weli waxa aan arkaynaa in isu talintaan indha la’aanta ihi ay ku socoto si aan laga hadli karin, balse ay kun jeer ku raalli yihiin kuwa loo talinayaa. Isu talintu ma ahan waxa aan ka soo horjeedno ee waxa laga soo horjeesan karaa waxaa weeye is qasbidda lagu fulinayo daaha isu talinta ama waaninta iyo la talinta. Hadalkeenaasna waxaa ka caddaan kara in uu guurku ku imaan karo ama ay haboon tahay in uu ku yimaado talo ay isla gaareen waalidka iyo waladka guursanaya – wiil ama gabadh. Taasi hadaba weli nama tusinayso wax taladaas ku gaar yeelaya gabadha oo ka saaraya xukunka wiilka, balse waxa ay arintu isku si u qusaysaa wiil iyo gabadhba, weliba labada waa weyn ee is guursanaysa waxaa loo baahan yahay in uu mid walba dhankiisa ka haysto talada tolkiisa iyo asxaabtiisa jecel.
Maanta waxaan arkaynaa in samafalkaas oo dhan loo adaeegsaday xumafal oo ay arintii gaartay in uu qof mas’ull ihi u isticmaalo qofka uu ka mas’uulka yahay sidii uu doono ee ay isaga dani ugu jirto, isaga oo aan inaba haba yaraatee u aabba yeelaynin danta iyo faa’iidada qofka uu ka mas’uulka yahay. Taasina waa dambi weyn oo ka mid ah dunuubta dhalisa ciqaabaha kulul, waxaa la yiraahdaa dambiga “ awood qalad u adeegsasho” = “power abuse”, waxaana maraka qaanuun kaste loo eego ka yaalla xeer ciqaabeed kulul oo faraha looga gubanayo.
Marka aan arinta dhanka kale ka eegno, qaar gabdhaha ka mid ihi waxa ay qalad ka fahmeen xorriyadda xulashada guurka, markaa ayey ugu dhaqmaan sida dadka aan diimaha iyo dhaqamada adag lahayn ee isaga nool sidii xoolaha. Qaar kale oo rag iyo dumar lihina waxa ay ka dhigeen arintii weliga mid la isku ciqaabo. Haddaan sii bal ballaariyo kuwa noocaas ah, waa kuwa ka xaniba gabadh aan weligeed ardiga ka dhaweyn, meel loo raadshana aan la aqoon guur u soo gacan galay, tiiyoo ay ku marmarsiyoonayaan; waa in la helaa weli. Waxay markaa sababaan in uu ninkii iska reer tabareedka ahaa ee dirqiga ku guursanayey galo kharash fara badan oo lagu baadi goobo weli, ku lumiyo waqti aan xisaab lahayn doon doonis nin aan meelna lagu ogeyn. Ugu damabystana ay taasi sababto in uu ka dib markuu kharash badan galo, uuna ku dhiboodo hawsha dib uga gurto oo ballantii guurkaba isaga baxo, xujadaas awgeed.
Kuwaas aan xusnay oo dhami ma ahayn ujeedka qoraalkeenan ee waxa aan u dan lahayn waa in aan sharrax ka bixino macnaha guur isku qasbidda, ama waxa aan u naqaan gabdh bixinta. Waxaa iska cad in inta badan dadku ay maanta weli ku xasillan yihiin in ay gabadhu tahay shey ka mid ah alaabta uu qofkaasi mulkiga u leeyahay, uuna siin karo cidda uu doono, ama uu ku gadan karo qiimaha uu doono. Haddaba waxa aan doonayaa in aan qoraalkeygaan ku kala saaro faraqa u dhexeeya gabadh la dhalay iyo orgi jadh ah oo biic loo soo xiray.
Run ahaantii halka loo cuskanayo qodobkani waa amarka welinimada ee laga helay Sunnada Nebiga NNKHA. Laakiin amarkaan Welinimadu wuu macno iyo sharraxyo batay oo xataa culimadii hore ee afarta Mad-habood ayaa isku waafiqi waayey in ay doodiisa meel wada dhigaan. Waxa uu murankoodu ukala dhexeeyaa qaar ku tagey waxa la yiraahdo Ijbaar –Qasab, kaas oo uu macnihiisu yahay in waalidka ama qofka kale ee mas’uulka ihi uu xaq u leeyahay in uu qasab sandulle ah gabadhiisa ugu guuriyo cid Alle iyo ciddii uu isagu la doono, aanana loo baahneyn in iyada lagala tashado inaba haba yaraatee iyo, qaar ku dagey in uusan waalidka ama mas’uulku wax xaq ah ku lahayn in uu fara gelin ku sameeyo gabadhiisa iyo cidday doonayso in ay iyadu guursato, haddii loo baahdo waano mooyee.
Haddaba waxaa haboon in aan bal doodaas iyada ah qaadaan dhigno oo aan si dhiraan dhirin ah ku soo saarno muranka meesha ku jira iyo wixii lagu xasilin karo ee la isugu wada imaan karo. Haddaan xusno sida ay kala qabaan afarta Mad-habood ee iyagu markastaba horseedka u ah Madaahibaha jira, waxa ay tahay sida soo socota:
AFARTA MAD-HAB IYO WAXA AY KA QABAAN IJBAARKA
Maaliki, waxa uu qabaa in gabadhu ha ahaato Bikra, garoob, carmal, saqiir, qaan gaar, caaqilad ama mid uu caqligeedu dhiman yahaye ay waajib tahay in loo guuriyo oo aysan iskeed isu guurin karin. Waxa uu aamin san yahay waxa la yiraahdo Ijbaar48.
Shaafici waxa uu qabaa in kol haddaynan gabadhu ahayn Bikra, saqiir ama dhallinyaro ay xaq u leedahay in ay is bixiso oo aan la qasbi karin.49
Xanafi waxa uu qabaa in mar hadduusan qofku qaan gaar ahayn wiil ahaayaa iyo gabdh ahaayaaba, ha ahaado Birka ama yuusan ahaane, mid la soo furay ama laga dhintay ama yuusan ahaan intabee uu u baahan yahay in loogu taliyo ama lagu dirqiyo guurka. Marse hadduu qofku lab iyo dhedig kuu ahaadaba uu qaan gaaro aan weligiisa xil ka saarneyn cidduu guursado50.
Xambali waxa uu qabaa in qof kaste oo aan qaan gaarin wiil iyo gabdh kuu ahaadaba uu u baahan yahay in loo guuriyo ee uusan iskii isku bixin karin.51
Guud ahaanba madaahibaha kala ah; Shaafici, Maaliki, iyo Xambali waxa ay shardi uga dhigaan guurka in la helo fasaxa waalidka ama weliga – wakiilka. Guurkii ay fasax la’aan iska xirtaan labada is qaadatay waxa uu agtooda ka yahay hal bacaad lagu lisay. Laakiin waxa ay tooshka ku qabteen fasaxa waalidka gabadha aan horey loo soo guursan ama bikrada ah. Hase ahaatee Xanafi oo ah kii ugu horeeyey Madaahibaha isagu shardigaas ma arko. Waxa uu ku adkaystay in qofku mar hadduu qaan gaar yahay, caqligiisuna taam yahay aan loo baahneyn in guurkiisa la fara geliyo.
Mad-habka Xambaliga iyo Xanafigu waxa ay leeyihiin qodob muhiim ah oo ay kaga yara duwan yihiin labada mad-habk ee kale, ayna u badan tahay in ay iyagu kaga saxsan yihiin. Qodobkaasi waxa yahay in ay qabaan in kol hadduusan qofku qaan gaarin wiil ama gabar ku doonaba uu u baahan yahay in uu helo weli ama wakiil nikaaxiya. Laakiin haddii uu ruuxu mar qaan gaaro aan loo shardiyeynin weli iyo wakiil toona (qaan gaarka qudhiisa ayey markaa su’aali ka imaanaysaa, oo waxaa lagu dooday da’ada uu qofku ku qaan gaaro. Doodaas geban gebadeeduna waxa ay ku ekaan kartaa in ay da’da qaan gaarku tahay tababar ka bilaabanaya 15 jir kuna ekaanaya 18 jir. Haddaba midka aan halkaan ula jeednaa waa derajada ugu dambaysa ee ah 18 jirka).
Waxaa xusid mudan in ay guud ahaanba Madaahibuhu ogolyihiin in ay jiraan arimo si gaar ah loo eegi karo – Al-istithna. Tusaale ahaan; Xanafiyiintu waxa ay ka soo reebayaan xukunkooda in la fara gelin karo guurka la arko in uu dhib iyo khasaaro u keeni karo is guursadayaasha ama tolkooda. Ha ahaadeen kuwa is guursanayaa qaan gaar ama yeysan ahaane. Maaliki waxa uu isna ka soo reebayaa xukunkiisa; in haddii gabadha la guursanayaa ay ka dhalatay qolo la liido, xag dhaqaale ama sharaf aysan lagama maarmaan ahayn in la helo weligeed52.
Haddaan dib u fiirino daliilaha ay kala wataan Sheekh Xanafi iyo mucaaradiintiisa kala ah; Sheekh Shaafici, Maaliki, iyo Xambali oo iyagu shardinaya qasabka guurka gabadha. Aan ku horeyno qolada dambee, waxa ay daliilsanayaan dhawr Aayadood iyo dhawr xadiis oo caan ah, ayna ka mid yihiin kuwa hoos ku cad;
XUJJADA AY HAYSTAAN KUWA AAMINSAN IN DUMARKA LAGU QASBO GUURKA IYO JAWAABTA LA SIIYEY
Waxa ay u cuskadaan dodoodaan dhawr aayadood oo ku jirta Quraanka. hase ahaatee dhammaanba aayaduhu ma ahan kuwa si toos ah u abbaaraya macnaha ay ka baarayaan. waxaa kuwaas tusaale inookaga filan kuwa soo socda:
" ولاتنكحوا المشرمات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولوأعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولوا أعجبكم أولئك يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنة"
" Ha guursanina Haweenka Mushrikinta ah, intay ka rumeeyaan, addoon rumaysan xaqqa ayaa ka kheyr badan mid Mushrikad ehe, haba idin cajab gelisee - idin la fiicnaatee. Hana u guurinina Ragga Mushrikiinta ah ilaa ay ka rumeeyaan, addoon xaqqa rumaysan ayaa ka kheyr roon mid Mushrik ehe, haba idin cajab geliyee. kuwaasi waxay idinkugu yeerayaan Naarta, Eebana waxa uu idinkugu yeerayaa Jannada iyo dambi dhaaf"53 . kelmadda haatan aan uga dan leenahay aayadani waa; " ha u guurinina - gabdhihiinna". Halkaa ayey ka qaateen culimadani in ay waajib tahay in dumarku aysan is bixin ee la baxsho kolka la guursanayo: " Midkii idinka mid ah ee aan awoodin in uu guursado gabdhaha dhawrsan ee xaqqa rumaysan, ha iska guursado kuwa ay gacantiinu hanatay (aan cidda ka mid ahayn, hadana ku tirsan si addoonimo ah. Tani waa habka maanta loo yaqaan sidig "adopted child") oo gabdhaha xaqqa rumaysan ah. Eebena wuu ogyahay liibaantiina (halka ay ku jirto). qaarkiin qaar buu ka ahaaday - isku mid unbaad tihiin. Kuna guursada (gabdhahaas) ogolaanshaha reerkooda, si wacana u siiya Meherkooda, iyaga oo dhawrsan oo xumaan-zino ka dheer, saaxiibtinimana aan yeelaynin (ha iskala tumanina si ah; girl-friend ama amore)54. Kelmadda laga abbaarayo aayadanina waxa ay tahay; "Ku guursada idanka ehelkooda".
Mar kalena waxa ay culimadaas guurka qasabka ah aaminsani daliil ka dhiganayaan aayda kale ee uu Ilaahay ku leeyahay: " Uguuriya xaaslaawaha - doobka idinka mid ah iyo kuwa wanaagsan ee addoomadiina ah (rag iyo haween kay ahaadaanba). Hadday sabool-faqiir yihiin Eebe ayaa fadligiisa ku hodmin doonee. Eebana fadligiisu waa waasac, waana wax walba oge"55. Kelmadda laga abbaarayo aayadanina waxa ay tahay “ u guuriya".
" Kuwa xaqqa rumeeyow hadday idiin yimaadaan ah oo gaalada oo gaalada ka soo hijrooday imtixaana (in ay ka dhab tahay iyo in kale - interview), Eebaa og iimaankoodee. Hadaad ogaataan inay xaqqa (dhabnimo) u rumeeyeen waa inaydaan Gaalada u celinin, maxaa yeelay xalaal isuma ahan Meherkiina u celiya Gaalada. (dabadeed) in aad is guursataana waxba kuma jabna hadaad Meherkooda siinaysaan. Haweenka Gaalooba nikaax isuguma kiin xirna ee ha haysanina, weydiista waxaad Meher ahaan u siiseen Gaaladuna ha idin weydiisteen wixii ay Meher u baxsheen. Taasi waa xukunka Eebe uu dhexdiina xukumay. Ilaahayna wuu ogyahay, waana falsame".56.
Si uu macnaha aayadani usii cadaado waxaa haboon in lala akhriyo aayadda kale ee ku sii xigta ee uu Eebe leeyahay; "Nebiyow hadday kuu yimaadaan haweenka xaqqa rumeeyey (ee ka soo qaxay gaalada cadaadis diimeed awgiis -religious or political assylum seekers) si ay kuugula ballantamaan inay Eebbe keliya caabudayaan, waxna xadaynin, dhillaysanaynina -zinaysanaynin, prostitution caruurtoodana dilaynin - abortion, been abuurna la imaanaynin, prevarication, wax wanaag ah oo la farayna aysan Nebiga ku diidaynin -caasiyeynin, la ballantan una dambi dhaaf weydii Eebbe waa dambi dhaafe naxariiste ehe"57
Mar kale ayuu Eebbe ku sii acdeeyey aayadaha Qura’nka ah macnaha dhabta ah ee eray bixinada “weli”, “guur doorasho”, iwm. Waxa uu Ebbe leeyahay: " Hadaad furtaan haweeney taabasho (isu galmood) ka hor idinkoo wax (meher ah) u qadaray, waxa ay idinku leeyihiin kala bar intii aad u qadarteen, in ay isaga kiin cafiyaan mooyee, ama uu cafiyo midkii ay gacantiisa guntinta nikaaxu ku jirto (weliga). Hadaad iska cafisaan baase idin kugu dhaw dhawrsasho ahaan. Hana hilmaamina fadliga uu Alle dhexdiina dhigay, Eebena waxa aad camal falaysaan wuu arkaaye."58
Mar haddii aan ku dheeraanay taxa aayadaha ay culimada waajibinaysa bixinta haweeney la guurasano, aan mar kale u sii dhaadhacno sida ay culimadaasi u daliilsanayaan aayadahaas. Waxa ay fasirkooda xujjo ahaan ku keeneen in ay saddexda Aayadood ee kala ah; al- Nuur: 32, al-Baqara: 221, iyo al-Mumtaxina:10, ay toos ula hadlayaan ragga, dumarka ka sokow. Aayadda 4: 25 iyadu waxa ayba amraysaa in fasax la weydiisto ciddii dhashay gabadha la guursanayo59. Aaydda 11:237 waxa ay la hadlaysaa qaraabada iyo xigaalada ama ciddii kale ee mas’uul ah umana jeedo labada is guursanaysa midkoodna. Aayadda ugu dambaysa---waxa ay siinaysaa cidda ay gabadhu ka dhalatay awood buuxda oo ay ku joojin karaan guurkeeda60.
Ibn Xasam, Shaafici, Ibnu Carabi iyo kuwa kale oo iyaguna u kuur galay Aayadahaas waxa ay sheegeen in ay badankoodu u jeedinayaan hadalka ama amarka guur guntida ama xiridda –alcaqdu wa al-nikaax weliga ee aysan laba hadlaynin labada is guursanaysa wiilka iyo gabadha toona61.
Xagga xadiisyada waxa ay culimadaasi daliilsanayaan kuwa ay ka midka yihiin:
Waxaa Caa’isha laga soo weriyey in ay tiri, in Nebiga NNKHA uu yiri; “ Naag kaste oo la nikaaxo bilaa weli, nikaaxeedu waa baadil, waa baadil, waa baadil (3 jeer). Haddiise la iska nikaaxsado, naagtaasi waxa ay leedahay meher, waayo ninkaasi waxa uu isaga qaatay sidii xaas xalaal u ah. Haddii uusan weligeedii joogin, suldaanka (maamulka Islaamka) ayaa u ah weli ciddaan weli lahayn62.
Waxa uu Ibnu Cabaas soo weriyey in uu Nebigu yiri; “ Wax nikaax ihi ma dhici karo weli la’aan”63.
Waxaa kale oo uu Ibnu Cabaas soo weriyey mar kale in Nebigu uu yiri; “ Garoobtu iyadaa bixinta nafteeda uga xaq leh weliga. Gabadha ugubna (bikra) waa in iyada lagaga raalli ahaansho qaataa bixinteeda. Raalligeeduna waa amuska”.
Marka aan ka eegno dooda xagga culimada diiddan qasabka gabdhaha, waxa ay ku taagan yihiin xujooyinka soo socda;
Horta xadiiska aan siinay lambarka koowaad ee ah kan ugu horeeya uguna xoogga weyn ee ay daliilsadaan culimada weliga shardinaysaa waa mid aan lagu kalsoonayn xagga farsamadiisa. Wuu cillaysan yahay oo ninka la yiraahdo Zuhri oo ku jira taxa weriyeyaasha –sanadka xadiiska, waxa uu inkiray in uu xadiiskaan ka maqlay Jureyj oo ah ninka ku xiga ee soo weriyey xadiiska. Tanise markii ay dhacday Ibnu Xazam ayaa is dhaafsiiyey inkiriddaan oo yiri; “ Waxaa laga yaabaa in uu Zuhri iska illowsan yahay ee uu dhab aahaan uga maqlay xadiiska Jureyj” .
Hase ahaatee kooxda doodaan wadatay waxay yiraahdeen in uusan cudur daarkaani macquul ahayn, waxayna ku adkaysteen in taasi ay wax u dhimayso sharafta weriyenimo iyo caddaalad lagu sugo Sheekha la yiraahdo Zuhri. Waxa ay hadaba daliil taas ka soo horjeeda oo xoog leh ka dhigteen in; ay Caa’isha oo ah tii iyadu ka soo werisay xadiiskaan Nebiga ay qudheedu ku qal qaalisay gabadhay eedada u ahayd ee la oran jiray Xafsa guur, ayna ku nikaaxday ninkay ku qal qaalisay, iyada oo aan wax ogolaansho ah weydiin walaalkeedii gabadha dhalay oo joogay goobta.
Ficilkaas ay ku tallaabsatay Ca’isha (Allaha ka raalli ahaadee) waxa aan ka qaadan karnaa ilaa saddex xukun ama caddaymood oo kala ah:
in ay dumarku wax mehrin karaan. Marka nin iyo naag la isku nikaaxayo qasab ma ahan in sheekha nikaaxayaa uu nin ahaado. Naagta sheekhadda ah qudheedu waa ay nikaaxin kartaa. Maxaa yeelay marka ugu horaysa ma hayno wax Nas ah oo inoo caddaynaya in uu kan nikaaxa xirayaa nin uun ahaado. Marka kale waxa aan aragnaa Ca’isha, hooyadii mu’miniinta oo iyadu wax nikaaxisay.
In ay naagtu weli noqon karto. Ca’isha iyada ayaa ka weli ahayd inanta la mehriyey ee ay eedada u ahayd.
In uusan weligu ahayn shardi loo xanibayo guurka.
Intaas keliya kuma aysan ekaane kooxdani waxa ay hadana cillad u yeeleen xadiiska aan siinay lambarka labaad. Waxayna caddeeyeen in taxa ama silsiladda xadiiskani aysan gaarsiisnayn ilaa Nebigii ee ay meel dhexe ku go’an tahay. Sidaa darteed, waxaa suurta gal ah in uusan warku xadiis ahayn ee uu yahay hadal uu mid uun Asxaabta ka mid ihi iska yiri. Waxaa taa kaaga sii daran in ay la soo taagan yihiin in guud ahaanba inta badan nimanka laga maqlay xadiiskaan aysan ahayn niman ceeb la’, mana ku badna raggii caanka ahaa ee lagu wada kalsoonaa.
Ibnu al-jawsi oo ah ragga ku caan baxay kala findhicilinta xadiisyada, waxa uu yiri; inkastoo erayada xadiiska ku jiraa ay yihiin kuwa laga maqlay rag kale oo lagu kalsooni qabo, hadana guud ahaanba ragga xadiiskaan soo weriyey waa kuwa la duray- aan warkooda lagu kalsoonayn. Al-muwadha’ oo soo weriyey hadal sidaas oo kale ah, ma dhihin waa xadiis Nebiga laga soo weriyey ee waxa uu sheegay in uu Cumar yiri uun.
Waxaa intaas dood ahaan u sii dheer culimada ay ka midka yihiin; Ibnu xumaam oo noolaa (1457) iyo Zurqaani oo noolaa (1687), waxa aya iyagu ku doodayaan in macnaha erayga Ayim ee xadiiskaan ku jira aan loola jeedin dumarka oo keliya ee uu ku dhacayo qof kaste oo doob ah rag ahaayaa iyo dumar ahaayaaba, bikra ahaayaa iyo ahaaninaaba, horey guur ugu dhacyaa iyo ugu dhicinaaba.
Waxay werinta xadiisyadu ahaadaanba waxa haatan meesha yaallaa waa sidii loo fasiri lahaa guud ahaanba hab jeedka macnaha aayadahakan iyo xadiisyadatan si duuduub ah. Waxayna tani u yara muuqataa in uu jiro kala tagsanaan lagu kala tagsan yahay hab fasiridda aayadaha iyo xadiisyada. Waxayna taasi u badan tahay in ay ku xiran tahay hadba deegaanka iyo dhaqan dhaqaaleedka uu ku nool yahay sheekhaas fasirayaa.
Ibnu Rushdi oo noolaa (1198) waxa uu yiri; “ waxaa keenay in ay culimadu isku khilaafaan arinta weliga gabadha la guursanayo, in aysan jirin aayad ama xadiis si cad oo go’an u sheegaya shardinimadiisa. Guud ahaana Aayadaha iyo xadiisyada qodobkaas taabanayaa, ee ay labada dhanba daliilsanayaan, waxa mid kaste oo ka mid ihi yeelan kartaa macnayaal fara badan. Midda kale sugnaanta iyo ku kalsoonida xadiisyadu waa mid muran ku jirta64. Ibnu rushdi markii uu arinta sii falanqeeyey waxa uu gaaray geban gabadii in uu ku soo af jaro; in ay arintu isugu imaanayso in uusan weligu sharci ahaan asaas u ahayn guurka, laakiin ay kormeeridiiisa iyo tala gelintiisu lagama maarmaan tahay.
Haddaba intaas oo muran iyo dood ah waxaa lagala dhex bixi karaa qodobadaan soo socda;
In aysan horta waxa qasab ama ijbaar la yiraahdaa diinta Islaamka wax sal iyo raad ah toona ku lahayn, ee ay tahay dhaqamo haraadi ah.
In aan guur shurruudihii kale oo loo baahnaa oo dhan soo buuxshay loo xanibi karin weli aan markaa goobta joogin.
In uusan weligu markaste ku gaar ahayn gabadha ee wiilka qudhiisa ay tahay in lala socdo guurkiisa.
In haweenka iyo ragga qaan gaarka ah, talo galka ah ee lagu kalsoon yahay is maamulkooda aan loogu shardinaynin guurkooda weli.
In ay lagama maarmaan tahay in guurka qofka aan maskaxdiisu isku filnayn lala maamulo, taliyo ama hago.
In ay haboon tahay in guur kaste ay ka wada tashadaan labada qoys ama waalid, si loo sugo dhismaha qoyska cusub iyo xiriirka labada reerba.
In aysan aslanba waalidku wiil iyo gabadh toona ku qasbi karin kana reebi karin guur, balse ay ku leeyihiin waano iyo wax tusid. Haddiise ay jiraan marmarsiyo cad oo waafaqsan diinta ayna cuskanayaan waalidku, sida; in ay qofka ka guursanaya ku durayaan diin la’aan, akhlaaq la’aan iwm. Waa loogu garaabayaa waalidkaas.
CIDDA GACANTA KU HAYSA FURRIINKA
Waxaa marka horeba aan waxa laga hadlo ahayn in laba qof oo si ay ka heleen heshiiska labada dhanba isku qaba la xukmiyo in uu midkoodna xaq u leeyahay in uu iska furo kan kale marka uu doono, midka kalese uusan wax xaq ah u lahayn in uu is furo ama iska furo kan kale. Hadalka Eebbe ee arintaas taabanayna waxaa ka mid ah;"Hadday kala tagaan Eebe ayaa mid walba waasacnimadiisa ku kaaftoominaya, Eebbana waa waasac (kheyrkiisu), waana xikmad badane"65. Waxa uu Ilaah inoogu caddeeyey aayaddaan in ay labada is qabtaa xor u yihiin in ay soo gaban gabeeyaan xiriirkoodii is qabis marka ay doonaan ee ay maslaxad u arkaan falkaa isaga ah. Taasina waxa u shardi ah in ay labada ay is qabistu ka dhexaysaa ku heshiiyaan ee aan cidna la dirqinin. Sidaa si la mid ah in aan midna lagu dirqin in uu ku hoos jiro xarig qabitaan oo uusan ka raalli ahayn. Mar kalena Eebe weyne waxa uu xorriyad buuxda u siiyey labada iyaga oo horey isu qabay hadana kala tagey ee damca in ay dib isugu soo noqdaan, maadaama ay labadoodu isku afgarteen arinta. Waxa uu Alle yir; " Wax dhib ihi kuma jiraan haddii ay isa soo ceshadaan (guur rajci ah), hadday umaleeyaan in oogayaan xuduuda Eebe (aysan mar dambe Alle ku xad gudbaynin iyaguna isku xad gudbaynin)"66
Kol haday arintu caynkaas tahay maxaa keenay in uu furriinku si adag ugu jiro oo ku xajisan yahay gacanta ninka, tan haweeneyda ka sokow? Waxa aan leeyahay, arintaasii waxa ay ku lug leedahay dhaqan jaahili, iyo ka xayuubinta dumarka laga xayuubiyey xorriyada guur xulashada ee aan ka soo hadalknay.
Waxaa iska dabiici noqonaysa in kol haddii markii horeba xaaska lagu guursaday ogolaansho aan ahayn keeda, iyada ka soo go’ay aysan hadana wax xaq ah u lahaan karin in ay is furto. Sidaa darteed waxaa iska dabiici noqotay in uu nin mid haweeney ah isaga haysto meher muddo sanooyin ah, iyada oo intaa ka baryeysa in uu iska furo. Waxayna ku adkaysataa marka ay naag kulul tahay ninkaas madaxayga ha layga dhigo, isna marka uu ka sii kulul yahay ayuu ugu baaqaa in ay is furato. Ugu yaraan waxa ay isku furan kartaa meherkeedii hadduu u naxariisto, haddii kale waaba diyadeedii.
Waa hubaal in ay dumarku ku deg degaan furriinka, oo waxaa iska caadi ah in ay iska tidhaahdo; “ i fur”, tiiyoo ay qalbigeeda hoose iska leedahay; tusi inaadan u baahnayn si uu kuugu jilco. Waxaana weliba meelaha qaarkood la oran karaa in ay kelmaddaas ku dhawaaqdo naag kaste oo la qabaa ugu yaraan maalintii laba jeer cel celis ahaan. Sidaa darteed haddii amarkoodaas loo raaco habeena naag lama qabeen, taasina waa mid ka soo horjeeda maslaxadooda. Hase ahaatee waxaas oo dhan waxa ka dambeeyaa waa xorriyadda markii hore laga qaaday, iyaguna ayba iska qaadeen ayna ku hareen in ay ku raaxaystaan nolol iska dhalanteed iyo is tus tus aan qarsoonayn ku dhisan.
Waxaa la arkaa haddii haweeneyda laga dhaadhicin lahaa in is qabiddu aysan ahayn in iyada uun laga faa’iidaysanayo ee ay tahay qaacidada lagu wada dhaqmayaa; “ buda qabe iyo biya qabe waa isu baahanyihiin“, waxa ay garan lahayd danteeda. Tan kale haddii la baro in taladeedu ay socoto oo hadday codsato furriin ay arintu tageyso furriin, waayo reer kama dhisman karo hal dhinac marka uusan dhinicii kale ka raalli ahayn dhismihiisa, waxa ay ka fiirsan lahayd hadaladeeda.
Labada is qabta waxa uu mid kastaaba u madaxbanaan yahay in uu soo bandhigo iska casilidiisa heshiiskii guur isku qabidda ee kala dhexeeya dhanka kale markii uu doono. Mana jirto inaba haba yaraatee wax ay arintaas ugu kala duwan yihiin nin iyo naagi. Waxa ay ahayd Bariira oo inan Jaariyada ahayd tii ka soo dacwootay, ninkeedii; Markaas ayuu Nebigu ku yiri; “Bariiray, adiga ayaa u madaxbanaan go’aanka naftaada. Hadaad doonaysana iska fur ninka hadaad doonaysana iska hayso67”
Akhristow mawduucani waa mid ay doodiisu soo taxnayd tan iyo beri hore. Intaa waxa ay culimadu ugu qaybsanaayeen qodobkaan laba kooxood. Qaar aaminsanaa in ay dumarku xil madaxtinimo xamili karaan, ayna banaan tahay in laga dhigan karo madax iyo qaar ka soo horjeeday oo taagnaa in ay tahay mid ka mid ah dambiyada ugu waa weyn iyo halaag in dumar laga dhigto madax oo ay dal hogaamiyaan. Nasiibka Soomaalida iyo guud ahaanba inta badan dunida Muslimkase wax akhristow u soo hormaray oo ku xoogaystay maadaama ay ahayd mid waafaqsan dhaqankii jaahiliga ahaa ee hore fikradda culimada diiddan in dumarka laga dhigto madax.
Culimadani waxa ay ku tageen in aysan shariica ahaan ku banaanayn in ay dumarku u taliyaan dawladda Islaamka ah, weliba waxa ay aad uga biya diideen in noqoto jagada ugu saraysa ee dalka sida madaxweyne, boqor, khaliif, imaam iwm. Waxa ay ku andacoonayaan in ay hawlaha oo kala jira awgood ay jiraan hawlo u gaar ah ragga oo aysan inaba haba yaraatee dumarku soo hawaysanaynin. Waxa ay leeyihiin waxaa ka mid ah waxyaalaha ka reeban dumarka ee u gaarka ah in ay ahaadaan shaqada ragga; madaxtinimada, tala go'aaminta, maragfuridda, welinimada, reer ka mas'uul noqoshada, wax mehrinta, qaadinimada iwm. Waxa ay markaa arkayaan culimadaasi in ay haweenku leeyihiin hawl u gaar ah oo aan loogu tageynin. Hawshaasina waa in ay noqotaa daryeelidda caruurteeda, ninkeeda, gurigeeda, iyo alaabta taalla.
Sidaa darteed, marna iyagu iskuma ay daraan mas'uuliyadaha iyo xilalka uu qof walbaa hayo, oo dumarkuna waxa ay leeyihiin hawsha guriga ragguna hawsha bulshada iyo maamulka arimaha dibadda ee guriga. Dhaqan ahaan si taas loo xoojiyo waxa ay ragii hore isticmaaleen qaacido siyaasadeed aad u xoog badan oo ay adag tahay in ilaa maanta la gooyo. Taasina waxay tahay in la jideeyo kala duwitaan cuntada tan ay ragu cunayaan iyo tan ay dumarku cunayaan. Waxaa wax lala yaabo ah in arintaan si loogu saleeyo kala duwanaansho ay labada ruux kukala duwan yihiin nuxur ahaan la yiraahdo “ma naagaha cunta xaabka ah cuna ayaad acqli ka sugaysaan"”, "“xabad caano galeen caqli ma galo" iwm. Hadaba iyada oo taas la hirgelinayo waa adiga arkaya akhristow in marka neef adhi ah ay reer qashaan si ay ugu qadeeyaan hilibka waxa loo qaybiyaa labo; “hilib rag iyo hilib xaawaley”. Xaawaley oo loola jeedo dumarka waxa loo ogolyahay in ay cunaan xubnaha ay ka midka yihiin: “ mijaha, caloosha, kelyaha, madaxa, maskaxda, iwm”. Laakiin ragga oo iyagu mar kaste loo qoondeeyo door ahaan waxa ay xaq buuxa u leeyihiin in ay cunaan xubnaha ay ka midka yihiin; “legga, wadnaha, garabka, lafdhabarta iwm”. Intaas keliyana arintu kuma eka oo ma ahan mid uu qofku isticmasali karo akhyaarkiisa ee hadii uu nin damco in uu cuno mid ka mid ah xubnaha hilib ee ay dumarku cunaan waxa laga saarayaa liiskii raganimada wuxuuna u ban baxay ceeb iyo fadeexo laga yaabo in ay dhaxalsiiso dambi qoyseed lagu xukumo waayo waxa uu qoyska uu ka dhashay u soo jiiday dhegxumo iyo ceeb.
Si kastaba arintu ha ahaatee, akhristow, si aannu xaqiiqada u gaarno, waxaa nala gudban in aannu eegno waxyaalaha ugu waa weyn ee sababta u ah in ay culimadeena casrigaan maanta ah jiraa ay ku adkaystaan in ay labada fikradood middaas diidmada -( negative) ah door bidaan. Waxa aan anigu arkayaa in ay cilladda taas keenaysaa ay tahay mid keliya. Taasi waxa ay tahay in la isku raacay in aan marnaba laga daba hadlin wixii ay culimadii hore beri hore go'aamiyeen. Ha ahaadeen waxaasi wax si dhab ah ugu taagan xukunkii la rabay ama wax u baahan baaritaan iyo sharaxaad dheeri ah ama cusub.
Waxaa haddaba rasmi noqday oo la isku raacay fikrad laga qaatay qodobka kaga jira ilaha shareecada lambarka saddexaad ama afraad ee loo yaqaan "Ijtihaad". Lambarka koowaad iyo labaad waxaa soo kala gelaya Quraanka iyo Sunnaha. Kan saddexaad iyo afraadna Qiyaaska iyo Ijtihaadka. Haddaba si ay ugu xoog badnaadaan doodooda ayey u egtahay in ay culimada jeclaysatay in aan dumarka talo loo dhiiban ay miciin bideen "Ijtihaad ka". Isla markaasna inta ay mar hore fatwa Ijtihaadi ah oo la fidyooday ku dhegeen ku adkaysteen in Ijtihaadkiiba la xiray oo aan mar dambe loo noqonaynin. Taasina waxa ay markiiba ka xirtay ishii ay isticmaali lahaayeen kooxdii kale.
Mas'alooyinka noocaas oo kale soo gelayaana waa ay fara badan yihiin oo laguma soo koobi karo middaan oo keli ah. Laakiin si aan jawaabtanada ku salaysan ogolaanshaha - (positive) ugu xoojinno isla ishaas ah "Ijtihaadka" ayaa waxaa inala gudboon in Ijtihaadka qudhiisaba ka wada hadalno. Waa in aan ka sal gaarnaa hadalka ah Ijtihaad baa la xiray oo lagu joojiyey culimadii hore sida aannu uga salgaarayno halku dhegga ah " waxaa ba'ay ama rogmaday qoonkii ay naagi u taliso".
MA LAGA DABA HADLI KARAA CULIMADII HORE?
Waxaa halku dheg culus oo aan lagu war celin u ah dadkeenna odhaahda ah; " Rag waa raggii hore hadalna waa hadalkay yiraahdeen". Shaki kuma jiro in ay dad badani u arki doonaan gef weyn oo la galay in laga soo horjeesto ama laga doodo fatwo ama ijtihaad ay baxsheen culimadii hore sida kuwa ku caan baxay Afarta mad-habadood ee caanka ah. Welibana midda ka sii darani waxa ay tahay in uu nin iska caadi ah oo aan loo aqoonsan Sheekh sare, iska dheh qoraaga buuggaan Qaasimoo kale, uu ka doodo masa'looyinka noocaas ah ee xasaasiga ah. Hase ahaatee akhristow wax kaste oo lagu fikiraba waxa ila habboon in la is xijiyo xagga caddaaladda iyo dhex dhexaadnimada, aanana lagu hadimoonin ku dayasho indha la'aan ah iyo ku adkaysasho dhaqan awoowayaal.
Haddaan toos u soo abbaarno ujeedadii qoraalkeenan ee ahayd bal in ay dad maanta nooli wax ka dhihi karaan tafsiirkii iyo sharrixii, ama fatwadii iyo Ijtihaadkii ay baxsheen culimadii hore ee Madaahibaha iyo in kale, oo ay tahay in aannu intii hore uun isaga qaadano si lama taabtaan ah.
Waxa aan marnaba cidi ka doodaynin in ay culimadii hore muujiyeen dadaal aad u sareeya oo runtii ay kaga soo bexeen kaalintoodii mas'uuliyadeed ee ka saarnayd diinta Islaamka iyo wax u qabashadeeda. Waxa ay adeegsadeen waxa markii dambe loo baxshay Ijtihaad oo lagu macneyn karo "Dadaal xad dhaaf ah" si ay u soo saaraan xukunka Shareecada ee u baahan in lagala soo baxo diinta.
Sida la wada ogsoon yahay waxaa marka hore xukunka laga qaataa Qura'anka. Haddiise laga arki waayo qodobkaas, waxaa laga deyayaa Sunnaha. Haddii laga waayo hadana Sunnaha waxaa laga baaraya Ijmaaca, laakiin marka Ijmaaca laftiisiinalaga waayo waxaa laga deyayaa Qiyaaska oo ah in dhacdada markaa taagan lagaga qiyaas qaato mid ku cadaatay Aayad ama Xadiis. Haddii si toos ah ama si dadban toona lagaga qiyaas qaadan waayo waxaa la miciin bidayaa Ijtihaad. Ijtihaadkuna Qiyaaska qudhiisa kama maqna. Marka hadalka is kale loo yiraahdo Qiyaasku waaba Ijtihaadka qudhiisa, waayo marka wax la isku qiyaasayo waa la ijtihaadayaa. Ijtihaadka waxaa isku dayi kara oo keliya qofkii uu cilmigiisa iyo caqligiisu gaaray. Waxaa Ijtihaadka lagu xiray shuruudo fara badan oo aan tusaale ahaan uga soo qaadan karno kuwii uu Sheekh Qasali oo noolaa 505 H./1111 M. u dejiyey. Kuwaas oo ay ka mid ahaayeen kuwa hoos ku cad;
Waa in uu korka ka xifdisan yahay ugu yaraan 500 oo Aayadood oo xukunka ku shuqul leh.
Waa in uu yaqaanaa jidka loo fahmo ama loo sugo Axaadiista.
Waa in uu dhab ahaan u kala yaqaan furuucda iyo asalka. Islamarkaasna waa in uu yaqaanaa habka ay culimadii hore u mareen fasirka furuucda, iyo sida uu ahaa Ijmaacoodu.
Waa in uu si daqiiq ah u yaqaanaa habka xukunka looga soo saarto Quraanka iyo sunnaha.
Waa in uu si rasmi ah u yaqaannaa luuqadda Carabiga.
Waa in uu kala yaqaannaa Nasakha iyo Mansuukha. (Aaayadaha ama Xadiisyada la badelay xukunkoodii – nasakh, oo kuwa kale oo ku haboon xilliga dambe lagu baddelay - mansuukh)
Waa in uu si fiican u baari karaa sixada iyo sugitaanka Xadiiska68.
Ijtihaadka culimada muslimiintu waxa uu bilowgii u socday si tartar leh. Waxa uu maalin walba soo saarayey fikrado cusub oo laga soo dhiraandhirinayey kitaabka iyo sunnaha, isla markaasna ku abbaarnaa dhacdooyinka taagnaa. Waxaa jiray u hanweyni iyo ku dadaalid barashada Islaamka. Waxay arintu sidaa ku socotaba waxaa waayo dambe dhacday in la cabburiyo xorriyaddii Ijtihaadka. Waxaa iska caan noqotay kelmadda ah "Ijtihaadkii waa la xiray - insidaad al-ijtihaad".
Arintani waxa ay dhalisay in ay culimadii isku hawli jirtay Ijtihaadka si tartiib tartiib ah uga dhuuntaan saaxada. Ka dibna markii ay kuwii u hanweynaa sii adkaynta iyo joogtaynta xukunka Islaamka yara qarsoomeen waxaa iska sii rasmi noqotay xiritaankii Ijtihaadka, oo waxayba noqotay in aan la isku dayin dadaalkii loogu jiray tafsiirinta iyo waafajinta macnaha diinta Islaamka casriga jira. Markaa ayaa waxaa si dayac ah u lumay xirfaddii Ijtihaadka ee lagu keeni lahaa xukunka la qabsanaya maslaxada dadka ee isku baddelaysa hadba xilliga iyo duruufaha ay ku jirto iyo waajibaadka Eebbe labadaba. Hadana waxa ay taasi sii dhashay in lagu dhiirado in la hirgeliyo dhaqamo jaahili ah oo ka soo horjeeda ujeedaddii uu Islaamku u yimid oo dhanba, ama ugu yaraan qasadkii shareecada (maqaasidu al-Shariicah), tiiyoo la isku qancinayo in Shariicaduba dhaqankaas tahay. Halkaa ayuuna ku qarsoomay magacii ijtihaad, wuxuuna iska noqday wax ay mar mar uun culimada aadka u sii dhex dabaalatay cilmigu ka akhriyaan kutubtii hore. Hase ahaatee ay isaga qaataan wax hore oo aan cidina maanta ka oran karin war celis.
Laakiin si aan arintaa u baarno aan isweydiinee ma dawbaa in aynu ku doodno in ay wershadeena soo saarta Tomatadu tahay mid aan maalin walba ka heli karno qasacado yaanyo ah oo cusub -fresh, tiiyoo aan diidanahay in laga shaqeeyo ama la furaba wershadda albaabkeeda. Islamarkaasna ay alaabtii ceeriineyd ee wax laga samayn lahaa halkaa iska taallo. Taa waxa aan ula jeedaa; ma dawbaa in aan ku doodno in diintu ay tahay mid la socota oo la isku xukumi karo waqti kaste oo jira iyo meel kaste oo la joogo iyo duruuf kaste oo lagu jiro, islamarkaasna aan ku adkaysanno in la xiro fasirkii iyo ka shaqayntii macnihii Islaamka. Taas oo ahayd in laga soo saaro xukunka kol walba looga baahan yahay Shareecada.
Waxaan ognahay in ay maalin walba wax cusubi ku soo kordhayaan dunida, ayna u baahan yihiin in lagu xukmiyo Islaamka. Waxaa la gaarayaa horumar shar iyo kheyrba leh, waxaana lagama maarmaan ah in dhacdo walba lagu saleeyo kitaabka iyo sunnaha. Haddaba waxaa lagama maarmaan noqonaysa in la helo culimo aad ugu takhasustay Shreecada isla markaasna ku nool dunidaan aan ku noolnahay, iyada oo weliba shardi laga dhigayo in uu sheekhu la socdaa waxa ka jira dunida uu ku nool yahay. Culimadaas haddaba mucaasiriinta ah ee ku xeeldheeraatay barashada Sharciga Islaamka waxa dushooda saaran in ay arin kaste oo jirta ka dhigaan mid la noolaan karta xaalka maanta ama maalinkaas kale ka jira dunida. Taas oo laga dhawrayo in ay dib udhac iyo jiha wareer ugeysato hab nololeedka, dhaqan dhaqaaleedka, nidaam sharafeedka, iyo guud ahaanba sumcadda ay dadka Muslimiinta ihi ku leeyihiin wejiga dunidatan, taas oo ay isla markaasna xifdisanayaan aakhiradooda.
Arintaan aan kor ku xusnay waa mid ku salaysan Fiqhiga Islaamka. Waxaa jirta qaacido Fiqhi oo caan ah odhanaysana: “ lama inkiri karo in ay axkaamtu isla badesho samanada ama xilliyada”69. Mar haddii uu is baddelo dhaqanka iyo caadada ay qolo haysato, si kastaba is baddelkaasi ha ku yimaadee, waxaa lagama maarmaan ah in ay axkaamtii Fiqhi ee aan markaas ku salaysnayn aayad uu xukunkeedu go’an yahay isla baddelo hab dhaqameedkaas. Waxaa muhim ah in xukun fiqhiyeedkaasi uu waafaqo caadadaas cusub. Tusaale ahaan waqtigii Salafka ayaa waxaa batay mucaaradadii iyo qabqablayaashii dagaalka, kuwaas oo dabada ku watay fasahaad ballaaran oo dhan walba leh (sida kuwa maanta ina haysta), markaa ayay dawladdii Islaamku soo saartay axkaam siyaasadeed ku soo rogaysa xukun deg deg ah guud ahaanba dalka. Inkastoo uu Cumar bin Cabdil caziz ahaa kii ugu horeeyey ee soo saara xukunka noocan ah, waxa uu noqday xukunku mid lagu sii dhaqmay oo ay dawladba dawlad ka sii dhaxashay. Markii uu Cumar soo saarayey sharciyadaas cusub waxa uu yiri “ in alla inta ay dadku faajirnimo sameeyaan ayaa xukunno cusubi u soo bixi doonaan”70.
MAXAA XIRAY IJTIHAADKII?
Haddaan is weydiino "war maxay muslimiintu ku keeneen in ay xiraan Ijtihaadka? Maxaase loo waayey culimo u kacda hawsha Ijtihaadka?" waxa aan u malayn karnaa in ay is tusiyeen dhawr arimood oo soo socda;
1-Malaha waxaa ku adkaaday shuruda lagu xiray oo Sheekh walba wuu ka niyad jabay in uu soo buuxiyo.
Umalayn mahayo in ay taasi jirto, waayo shuruuduhu ma adka, waa mide. Midda kale waxa jiri kara Mujtahid Muqayad (mid ku Ijtihaada Mad-hab gooni ah ama Mas'alo gooni ah, oo lagu yaqaan takhasus u gaar ah), kol hadduu gaari waayey Mujtahid daysan mudhlaq (mid wax kaste ku ijtihaada ).
2-Malaha waxa ay ka baqeen in ay gefaan oo ay ku khaldamaan diinta Ilaahay.
Umalayn mahayo in ay taasina jirto, waayo waxa ay ogyihiin in marba hadday ujeedadoodu tahay in ay diinta Islaamka wax ku taraan ama ay Muslimiinta u adeegaan, ay helayaan hal Ajir hadday ku qaldamaan dadaalkooda, hadday ku saxmadaanna waxa ayba helayaan laba Ajir. Markaa meesha maba oollin wax gef iyo khasaaro laga cabsado ihi, maadaama uu qofku hawsha Alle dartii wax u qabanayo oo uusan laqdabo u jeed ahayn, uusana ahayn mid isaga madax adag waxyaalo lagaga saxsan yahay, ama uusan daliil quman u haysan.
3-Malaha waxa ay ka baqayeen in ay Muslimiintu eedeeyaan. Umalayn mahayo in ay taasina jirto, waayo, inkastoo uu jiray ol-ole lagu gaban gabaynayey Ijtihaadka, hadana waxaa feer socday ol-ole lagu noolaynayey oo waxaa jirtay dhiirri gelino fara badan iyo dadaallo fara badan oo ay qaar Muslimiinta ka mid ihi ku jireen si uusan Ijtihaadku u cirib go'in. Tusaale; waxaa jirtay in culimo ka soo horjeesatay in uu Ijtihaadku sii socdo ugu dambaystii la gaarsiiyey heer laga saaro Mad-habka Suninimada. Waxaaba ka mid ahaa culimadaas caanka ah; Xashwiyah oo ka mid ahaa kuwii ugu firfircoonaa Mad-habka Xambaliyada71.
4-Malaha waxay is yiraahdeen waxaa dhamaaday Mas'alooyinkii xukunka ahaa oo laga wada hadli lahaa ama laga doodi lahaa xukunkooda. Umalayn mahayo in cidina taas ku fikirtay, waayo sida ay casrigeenaanba noogu soo baxayaan maalin walba dhacdooyinka cusubi ayey ugu soo baxayeen kuwii naga horeeyey qudhoodana. Sidaa darteed waxa ay qiyaasi kareen in dunidu ay maalin uun gaarayso halka ay maanta gaartay.
5-Midda aan doodaan ku soo afjarayaa waxa ay tahay, horta waxii ka horeeyey qarnigii 5 aad ee Hijriga ama kii 11 aad ee Miilaadiga, waxa uu Ijtihaadku u socday si caadi ah, inkastoo uu marba marka ka sii dambaysa sii yara qarsooomayey. Intii waqtigaas ka sii dambaysayna wuu sii socday laakiin maadaama uu xawligiisii ka soo degay ayuu magac ahaantii u gabay oo isaga socday si aan la magacaabin.
Sidaa darteed waxa aan leenahay ma jirto in uu rasmi ahaan u xirmaday Ijtihaadku ee waxa jirta in uu Naxuusay ama iska yaraaday si sibiq ah. Waxaa jiray in uu saman walba joogay ugu yaraan Sheekh caalim sare ah oo baxsha fatwooyinka iyo sharraxa macaanida Islaamka. Taas in waxayba si cad u rumaynaysaa ballantii uu Alle ku qaaday in uu diintaan xifdinayo, markaa Nebiguna isaga oo taas sii sharaxaya uu inoo sheegay in uu qarni walba diintaan usoo baxayo mid boorka ka jafa oo dhidibada usii aasa iyada oo liici rabta. Tusaale; Cabdil Jabaar iyo Ardaygiisii Abu xuseen al Basri (415/ 1024), Juweyni (478/1085), Qasali Ibnu Caaqil (qarnigii 11 aad ), Suyuudhi (911/1505), Ibnu Teymiyah (652/1254 ), Nawawi (676/1277), Sheekh Jeberti (qarnigii 19 aad ) iyo sheekh Saylaci (qarnigii 14 aad)72. (Waxaa xusid mudan in labada mujtahid ee ugu dambaysa taxeennan ay ahaayeen rag Soomaaliyeed oo ka soo baxay koonaha Geeska Afrika).
Haddii la leeyahay, lama dhiiri gelinin in ay culimadu isku dayaan ijtihaad, oo waxaa hortaagnaa dawladihii jiray, taasi ma sugnaanin. Waxaa ku sugan taariikhda in ay in fara badan oo ka mid ah madaxdii soo maamushay dawladihii Islaamka ay ku boorrin jireen culimada in ay dadaalaan, si ay fatwa u baxshaan. Taasna waxa uu macneheedi si toos ah u noqonayaa in la dhiiri gelieyey isku laylinta ijtihaadka. Sidaa si aan ka yaraysan waxaa iyaguna u dhiiri gelinayey ijtihaadka qaar fara badan oo ka mid ahaa culimadii hore ama dhexe ee muslimiinta soo maray, taasina ma ahayn tu joogsatay ee waa mid si is daba joog aha u socotay ilaa ay nagu soo sintay xilligaan maanta ah. Sida beryo caan baxday, waxa ay awoodista ijtihaadku ka mid ahayd afarta shardi oo laga doonayo kii noqonaya Imaam ama Khaliifka Muslimiinta"73 Sidaa si la mid ah waxaa isna yiri Imaam Maawardi, oo ku tagey in Ijtihaad kariddu ay tahay mid ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay Imaamka muslimiinta si uu xilkiisa ugu guto si habsami iyo kalsooni ah. Imaamku kuma koobin shardigaan madax dalka oo keli ah ee waxa uu weliba u sii shardiyey golaha wasiirada ee la shaqaynaya74.
Midda kale waxa aan leenahay, waxaad arkaysaa culimada oo marka ay doonayaan in ay ku doodaan in uusan casrigaan maanta ah ijtihaad banaanayn odhanaya “Ijtihaad hadda ma furna”, “Ijtihaadkii waa la xiray”, adigu ma ijtihaad baad sheegan kartaa”, “ma waxada doonaysaa in aad iskala meel dhigto culimadii waa weyneyd” iwm. Hadaba waxa ila quman in aan ku dhiiranaano in aan su’aalahakan la isku cabsiiyo ka jawaabno. Waa marka ugu horaysa ee haddii loo fiirsado kelmadda af-carabiga ah ee ah "Insidaadul Ijtihaad" (ijtihaadkii waa la xiray) waxa ay ku salaysan tahay " Infacala" oo waxa ay ku tusinaysaa in waxa la sameeyey, laakiin lama caddayn cidda samaysay. Hadda waxa ay dheheen waa la xiray, balse ma aysan caddaynin cidda xirtay. Markaa waxa aan leenahay; ayaa xidhay, bal noo sheega, haddiise ay qola xiratay dee iminka ha na siiso furihii, illeen waan la wadaagnaa diinta maantana waxaanba u sii baahi qabnaa Ijtihaadke.
Haddiise lagu andacoonayo ma waxaad la tartamaysaa culimadii hore? Waxaan si furfur caddi ah ugu jawaabi karnaa “Haah”, maxaa dhacay? Miyaanaan dad wax fahmi kara siday iyaguba wax u fahmayeen ahayn? Ma keligood baa diintaan lagala dardaarmay? Ma wax cadaynaya in aan kooxdaas horaysay keliya uga harno wixii cilmi ah baa jira? ma wax cadaynaya in ay nuqsaani anaga nagu jirto baa la hayaa? Ma wax cadaynaya in ay iyagu ka maskax iyo faham sareeyeen Bani aadamkaa caadiga ah baa jira? Ma iyagaa noo sheegay in ay iyagu kama dambaystii yihiin oo aan ka dibtood cidina diin ka hadli karin? Miyeynan iyagu ahayn kuwii nagu boorinayey in aan dhab diinta u barano oo ijtihaadno? Miyeynan ahayn iyaga qudhoodu kuwo sii sharaxay ama dib usharaxay oo wax ka badelay mas’alooyin diini ah oo ay culimo ka sii horaysay si u gooyeen ama xukumeen. Bal caawa Alla sabab la garowsan karo ii sheega.
CULIMADII HORE OO MAS'ALOOYIN SHARCI AH CASRIYEEYAY
Guntii iyo geban gebadii, weligeed bay dhici jirtay in mas’alo ay horay culimadu uga hadleen oo muddo lagu degenaa waa dambe laga daba yimid oo la rogay ama la baddelay. Iska daa in cid kale ay ka daba timaaddee waxaa dhacaysay in isla sheekhii markii hore jawaabta fidyooday uu hadana ka noqdo, isaga oo jawaabtiisa mar kale waafajinaya waayaha iyo duruufaha jira ee markaas taagan.
Waxa ay ila tahay in taariikhda uu ku bilowday mad-habka Shaafici ay inoogu filan tahay tusaale. Marka aannu aragno in shaafici uu badanaaba mas’alooyinka ku leeyahay laba qawl oo lakala yiraahdo; “Qawl qadiim” iyo “qawl jadiid”, (hadalkii – xukunkii hore iyo kii dambe) waxaan isla markiiba garanaynaa in uusan Shaafici isaga oo aan diinta waxba ka aqoon markii hore fatwa iska bilaabin ka dibna uusan xaqqa fahmin ee uu isku heer ku joogay labada xilliba (marka laga reebo in uu tiro xadiisyo ah oo uusan Baqdaad, Ciraaq ku maqlin ku maqlay Qaahira, Masar). Laakiin sababta ku kalliftay in uu ka noqdo qaar jawaabihiisii hore ah waxa ay ubadnayd is waafajinta dhaqanka, duruufaha, iyo dabeecadaha ka jira dhulka cusub ee uu yimid iyo fiqhiga Islaamka.
Maxaadse arinta Shaafici keliya ugu ekaanaysaa maad aragtid sida laga soo weriyey Cumar bin Khadhaab ee ah; “ Waxa uu maalin xukmiyey mas’alada culimada agtooda caanka ka ah ee la yiraahdo “Mas’alatul xijriyah”75 ee khusaysa dhaxalka uu fatwooday in aysan walaalada isku aabbe iyo isku hooyo ah iyo kuwa xagga hooyo keliya ihi wadaagi karin dhaxalka. Hase ahaatee markii ay walaalladii hooyo rafcaan ka qaateen xukunkaas, iyaga oo ku doodaya in ay xaq buuxa ku leeyihiin dhaxalka, ee ay hadana markale ku soo celiyeen dacwadii wuu ka noqday xukunkiisii hore oo waxa uu baxshay xukun ku salaysan waaqica.
Dhallinyaradaas dhaxalkooda ku dacwoonaysay oo laga hayo oraahda caanka ah ee “ka soo qaad amiir Cumarow in uu Aabeheen dameer ahaa, ma waysan isku hooyo na dhalin anaga iyo walaaleheenaan?”. Halkaa marakay walaaladaas doodoodii gaartay ayuu Cumar si daqiiq ah u garawsaday xaalada, waxa uuna xukmiyey in ay wadaagi karaan dhaxalka laba kooxeed ee walaalada aan isu hooyo iyo isku aabe ahayn. Markaas ayaa la weydiiyey; “Cumarow ma waadan xusuusan in aad sanadkii hebel dacwadatan sidaa iyo sidaa ku xukmisay?. Suuye, taasi waa sidaan maalintaas u xukmiyey tanina waa sida aan maanta u xukminayo”76
Ibnul Qayim ayaa kitaabkiisii uu u diray Abi Musa al-ash’ari ku fasiray hadalkaan Cumar oo waxa uu yiri; “Yeysan marnaba kaa reebin in aad xaqqa u noqoto mas’alo aad aad inta mar xukmisay aad hadana dib usii baartay ee aad ogaatay in aysan sidaad u xukmisay ahayn. Maxaa yeelay xaqqu isagu waa mid horeeyey oo aan waxna burinin, in xaqqa loo soo noqdo ayaana aad uga kheyr badan in baadil lagu sii fogaado”77.
Faqiiha weyn ee reer Xanafi ee magiciisa la yiraahdo; “Maxamad bin Caabidin” waxa uu yiri: “ In badan oo ka mid ah Axkaamta waxa ay isku khilaafsan yihiin hadba halka iyo waqtiga ay joogaan, iyada oo loo eegayo hadba dhaqanka, caadada, duruuf taagan, ama fasaad soo food saaray bulshadii, kaas oo laga yaabo in haddii uu xukunku weli sidiisii ku sii taagnaado uu dhaliyo dhibaatooyin ama xungurufo hor leh. Intaas keliyana maahee laga yaabo in uu markaaba khilaafo qaacidooyinka asaasiga ah ee shariicadu ay ku taagan tahay, kuwaas oo ah “Isu khafiifin iyo isu fududayn”. Taasi waa in laga dheeraadaa dhib, fidno, mashaqo, fasaad, ama ceeb”78.
Hadalkaa hadal la mid ah, laakiin ka sii caddayn og, ayaa waxaa mar hore yiri: Imaam Ibnul Qayim oo yiri: “Oo mar Alle markaad aragto caado la cusboonaysiiyey tixgeli, markii laga tagana ka tag xukunkeeda, oo weligaa ha ku dhegenaan axkaam laga soo guuriyey kutub hore. Balse ogsoonow, haddii uu qof kaaga yimaado gobol kale, ee uu kaa fatwa dalbo, ha ku socodsiin fatwadii gobolkaaga ee doon doon oo ku xidh tii gobolkiisii, ka dibna sii, jawaab ku haboon ama ku salaysan su'aashiisa, tiiyoo aad waafajinayso Kitaabka”79. Waana sidaas sida ay culimada intooda badani isku raacsan yihiin oo waxaa hubaal ah in isku toxobinta go’aano laga soo guuriyey kutub axkaameed lagu saleeyey dhaqan ka duwan dhaqanka ay leedahay cidda markaa la doonayo in lagu dhaqo ay tahay habowsanaan iyo hawtul hamagnimo.
Intaas keliya ceebtu kuma eka ee waxa ay saamaynaysaa sharafta iyo waxqabadka culimadii hore ee mas’alada kolkii hore ka jawaabtay. Waxaa imaanaysa ugu yaraan in qalad laga fahmo ulajeedkii ay lahayd jawaabtoodu.
Waxaa kale oo hadalkii Ibnul qayim ka sii mid ah in uu yiri: “ Oo qofkii ugu jawaaba dadka keliya wixii uu ka soo akhriyey kutub hore, ee khilaafsan caadada, dhaqanka, waqtiga, deegaanka, iyo guud ahaanba xaalad nololeedka labada qolo ee ay kala khusayso, dhab ahaantii kaasi waa uu lumay wuuna lumiyey cidduu u jawaabay. . . muftiga noocaas ah iyo dhakhtarka sidiisa oo kale ihi waa kuwa ugu jaahilsan dadka, Ilaah baa la kaalmo weydiistaaye”.
Is weydiinta su’aasha ah dumarku xil qaran ma qaadi karaan mise ma qaadi karaan qudheeda ayaa u eg mid aan haboonayn. Sababta aan taas u leeyahay waxa ay tahay in ay yihiin Bani aadam aan takoornayn, isla markaasna ay waajib ku yihiin wax kaste oo ragga ku waajib ihi. Sidaas si la mid ah guud ahaanba xilalka saaran ragga iyo weliba kuwa ka sii ballaaran ayaa iyagana saaran.
Intaas marka aan uga harno aragtida guud, aan u soo dhaadhacno xukunada kala duwan ee ay Culimadii hore ee Madaahibuhu ka gaareen, inaga oo isugu keenayna aragtiyadoodii iyo tafsiirkoodii si kooban:
Abuu Xaniifa oo isagu markaste ku jira kaalinta koowaad iyo Ibnu Jariir waxa ay ku adkaysteen in dumarku xaakim ka noqon karaan maxkamadaha Islaamiga ah oo ay xukun goyn karaan. Sidaas si la mid ahna waxaa laga soo weriyey Maalik.
Ibnu Jariir isagu waxa uu sii dheeraystay in aan marnaba Imaamnimada Muslimiinta loo shardinaynin labnimo ee ay u dhaxayso rag iyo dumar. Daliisha ugu haleelsiin og ee uu Ibnu Jariir haystaana waxa ay tahay; in ay banaan tahay in dumarku noqdaan Muftiyad (sheekh weyn oo diinta laga raacdo, kana jawaaba su’aalaha Islaamka ah ee aadka u daqiiqa ah). Sidaas darteed ayuu leeyahay ma jiraan wax u diidaya in ay xukmiso mas’aladii ay diin ahaanta uga jawaabtay. Inkastoo uu saaxiibkiis Abuu Xaniifa leeyahay halaga reebo xukunkeeda todobada dacwo ee loo yaqaan al-Xuduud, kuwaas oo uu isagu leeyahay in aysan kana markhaati kici karinin. Isla markaasna waxa uu qabaa in ay xukumi karto dacwooyinka la xiriira arimaha maaliyadda.
Dhabari ayaa haddaba isagu wixii oo dhan isku fuuqsaday oo ku mintiday in dumarku ay xukumi karaan wax kaste oo dacwo ah kala saar la’aan, isla markaasna ay dawlad xukumi karaan. Nebiga NNKHA ayaa waxa uu leeyahay: “Dumarku waa kuwo walaalo (isku aabe iyo isku hooyo, ama kuwo garab taagan ragga oo laga dhambalay ah80/81”
Mar hadday dooddu intaas inoo marayso ayaa waxa aan garan karnaa in aysan ugu yaraan wax mancinaya in dumarku ay madax ka noqdaan qaran dhan aysan jirinin. Waxan horay usoo marnay sharraxaadda aan ka bixinay tafsiirka iyo ujeedada uu leeyahay xadiiskii sukaha (keliga) ahaa ee ay daliilsanayeen culimada diidan in ay dumarku cid xukumaan.
Waxaan haddaba is weydiin karnaa miyey suurto gal tahay in mas’alada culayskeedu intaa la’egyahay ee ah in la sharciyeeyo ciddii hogaamin lahayd qaran ama qawmiyado dhan lagu soo afjaro hal xadiis oo isagana dood la gelin karo. Sida laga bartay sharci dejinta Eebbe wax walba inta ay cuf iyo muhimad la egyihiin ayaa loogaga hadlid badan yahay diinta. Sidoo kale loogu adkayn iyo xoojin daran yahay. Sidaas darteed, haddii ay arintu tahay in maamulka dawladda Islaamka ah laga reebo in ay haweeney xukunto, waxan dareemi karnaa in ay ku soo aroori lahayd arinta daliilo fara badan oo go’aan cad goynaya. Kuwaas oo ku kala imaan lahaa Qura’nka iyo Sunnaha.
Warkii oo dhan, waxaa qofka ku doodaya in dumarku ay dawlad hogaamin karaan, dood ugu filan in uu ku adkaysto ha la ii keeno daliil go’an – qadhci ah oo mamnuucaysa xukunka dumarka. Haddii kale ha la ila ogolaado in ay haweeney keli ihi dal iyo ka badanba u talin karto.